Asehon’ny zavakanto an-dalambe ny hiakiaka avy amin’ny vahoaka kolombiana leo herisetra, kolikoly ary fahantrana · Global Voices teny Malagasy
Bedesin'ny rindrin'i Colombia ny herisetran'ny polisy
Voadika ny 16 Jona 2021 4:30 GMT
“Mifandàna amin'ny valan'aretina hatramin'ny taona 1492″, “Raha mitokona aho, aza mitifitra”, “Mifandàna”. Zavakanto an-dalambe ao Popayán, Colombia, 5 Mey 2021. Saripika avy amin'i Fernanda Sánchez Jaramillo, nahazoana alalana.
Hatramin'ny 27 avrily lasa teo, Kolombiana an'arivony no nameno ny arabe ho fanoherana ao anatin'ny fitokonana manerana ny firenena. Nifoha hihaika ny fanavaozana ny hetra sy ny fanavaozana ny fahasalamana natolotry ny Filoha Ivan Duque ilay firenena zatra natory. Efa nisy ihany ny fihetsiketseham-panoherana tany aloha tany, saingy hita ho niraisan-kina kokoa sy tsy niova hery kokoa noho ny teo aloha ity indray mitoraka ity.
Vahoaka vazimba Misak manao diabe ao Popayán, Colombia tamin'ny 6 mey 2021. Saripika avy amin’ i Fernanda Sánchez Jaramillo, nahazoana alalana.
Lazain'ny mpanao fihetsiketsehana fa ny volavolan-dalàna tian'ny governemanta holaniana dia miantraika be loatra amin'ny saranga antonony sy ambany nefa ambany (kely) ny hetra aloan'ny mpanankarena. Tanjon'ny tolotra ny hametraka hetra mifototra amin'ny vokatra ao amin'ny firenena izay miantraika aminy mafy tokoa ny fahantrana, ny valan'aretina ary ny 14,2 isanjato amin'ny tahan'ny tsy fananana asa raha ny tamin'ny volana marsa teo.
Mpianatra, mpiasa, retirety, tanora, kilonga, tantsaha, afro-Kolombiana, ary vahoaka teratany no niditra tamin'ity hiakiaka ity ao amin'ny firenena izay mihalasa eo ampelatanana sy miangona eo amin'ny fiadidiana ny filoha ny fahefana mandritra ny fitantanana ny COVID-19, araka ny filazan'ny Transparency International. Milahatra faha-92 amin'ny firenena 182 i Colombia eo amin'ny tondro fandraisana kolikoly nalahatry ny fikambanana.
Voalokon'ny hafatra fahatezerana, fanantenana ary alahelo ireo manoloana ny tranobe, fivarotana ary andrim-panjakana maro manerana an'i Colombia, ary misy ny vondrom-piarahamonina manatontosa fijoroana ho an'ireo noratraina, novonoina, nohararaotina ary nampanjavonina tamin'ireny fihetsiketseham-panoherana ireny.
Tamin'ny 3 mey, notsipahan'ny Filoha Duque ny volavolan-ketra. Na izany aza, nitohy ny fihetsiketsehana satria niteraka hiaka tao amin'ny fiarahamonina leo herisetra nozakaina nandritra ny fitondran'ny filoha elatra havanana izay teo amin'ny fahefana hatramin'ny taona 2018 ny fanitsian-ketra sy (politika) fahasalamana. Nitombo ny fihetsiketseham-panoherana rehefa tsikaritra ny fivatravatran'ny herisetran'ny polisy.
Vahoaka tompontany Misak manao diabe tao Popayán, Colombia tamin'ny 6 Mey 2021. Sary avy amin'i Fernanda Sánchez Jaramillo, nahazoana alalana.
Mazava ny fitakian'ny mpitokona: tsy mila fanitsiana hetra sy fahasalamana; fandravana ny vondrona polisy misahana ny rotaka “Esmad” ary fialan'i Duque.
Nandritra ny fehim-potoana niasan'i Duque, mpitarika ara-piarahamonina anjatony, mpitarika tompontany, ary mpiadin'ny ady anaty akata teo aloha maro no maty amin'ny fomba manjavozavo sy ny tsi-fisaziana na dia eo aza ny fitakiana isian'ny rariny sy ny antso avo tamin'ny taona 2019 nataon'ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta Eoropeana, izay manahy amin'ny herisetra mihatra amin'ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny fahasarotana amin'ny fametrahana ny Dinam-Pandriampahalemana taona 2016 nifanaovan'ny governemantan'i Juan Manuel Santos [mpitondra teo aloha] sy ny Tafika Revolisionera Mitam-Piadiana an'i Colombia, fantatra mahazatra amin'ny hoe FARC.
“Izahay no tabataban'ireo tsy manam-peo intsony.” Ray aman-dreny sy zanaka manao diabe ao Popayán, Colombia tamin'ny 6 Mey 2021. Sary nopihan'i Fernanda Sánchez Jaramillo, nahazoana alalana.
Voarakitra ao Colombia ny zava-doza mampihoronkoditra indrindra amin'ny famonoana olona maro 126 samy hafa tanelanelan'ny taona 2020 ka hatramin'ny 3 mey 2021. Ary efa naneho ny endrika tsimifaditrovana nandritra ity fitokonana mitranga amin'izao fotoana izao ity ny herisetra ataon'ny fanjakana, mpiady anaty akata ary ny milisy ao amin'ny firenena. Nitatitra ny FTMF Kolombiana Indepaz ny fisian'ny famonoana olona miisa 31, famnjavonan'olona miisa 87, faharatran'olona miisa 1220, Faharatran'olona eo amin'ny maso miisa 18, ary trangan-kerisetra ara-pananahana mihatra amin'ny vehivavy miisa enina.
Manao ny tafahoatra ihany koa ny fampitam-baovao Kolombiana mampiasa ireo sarim-pihetsiketsehana manimba zavatra be loatra nefa tsy mampiseho ireo endrika fanomerana milamina, be mpanaraka sy maro dia maro mampiray ny tanora, olondehibe, ankizy, mpiasa, tantsaha, Afro-kolombiana ary vahoaka tompontany eny an-dalamben'i Colombia. Tamin'ny fotoana nanoratana, mitohy ny fitokonana. Maro amin'ny mpanao fihetsiketsehana no te-hitokona tsy misy fitsaharana mandra-pivalian'ny fitaian-dry zareo.
Ny sary manaraka etoana dia nopihana tamin'ny 5 sy 6 mey 2021 tao Popayán, renivohitry ny departemantan'i Cauca, miorina ao atsimo andrefan'ny firenena. Cauca no nahitana be indrindra ny herisetra mihatra amin'ny mpitarika sy mpikatroka tantsaha, afro-Kolombiana ary tompontany. Nandritra ny fihetsiketsehana ihany koa no nandratran'ny polisy tao Popayán ny mpianatra.
“Raha zara fa mamaky teny ny iray dia mitifitra be loatra,” nandritra ny fihetsiketseham-panoherana tao Popayán, Colombia, 7 Mey 2021. Sary nopihan'i Fernanda Sánchez Jaramillo, nahazoana alalana.
Ny sary etoana dia mamaly ankolaka ny fomba fijery ankapobeny ataon'ny fampitam-baovao be mpanaraka sy ny politisiana mampitovy ny mpitokona amin'ny mpandroba:
“Tonga izahay hanimba ny tsy firaharahanareo” tap Popayán, Colombia, 6 Mey 2021. Sary nopihan'i Fernanda Sánchez Jaramillo, nahazoana alalana.
Ny sary eo ankavia dia miresaka amin'ny vahoaka Kolombiana izay mahatsiaro ho araraotin'ny governemantany. Ny fandravahana eo ankavanana dia mampahatsiahy ny mpijery ny fitomboan'isan'ny vahoaka nanjavona tao anatin'ny taona vitsivitsy sy nandritra ny fitokonana.
Amin'ny ankavia: “Tsy alikan'ny governemanta izahay. Ovay ho tanjaka ny hatezeranao.” Amin'ny ankavanana: “Lasa aiza ireo nanjavona? Tsy nahatratra ny tsiaronareo akory ireo.” Tao Popayán, Colombia, 6 Mey 2021. Sary nopihan'i Fernanda Sánchez Jaramillo, nahazoana alalana.
Ny sary natao tamin'ny vatosanga etsy ambany no endrika maizina hanehoana ny ampingan'ny Tafik'i Colombia, izay any amin'ny fiandohany dia ahitana ny voanteny “Patria, Honor, Lealtad” (Tanindrazana, Haja, Fitokisana). Nosoloin-dry zareo izany ho lasa “Fitarihana, Horohoro, Famadihana”. Araka ny famotorana ara-pitsarana vao haingana, namono olona sivily ivelan'ny fitsarana mihoatra ny 6.000 ny tafika tanelanelan'ny taona 2002 sy 2008, izay nolazaina tamin-dainga ho mpiadin'ny mpikomy nandritra ny ady an-trano tao Colombia.
“Fitarihana, Horohoro, Famadihana”. ao Popayán, Colombia, 6 May 2021. Saripikan'i Fernanda Sánchez Jaramillo, nahazoana alalana.
Ny fandravahana etsy ambany indray manondro ny Escuadrón Móvil Antidisturbios, fantatry ny maro amin'ny fanafohezana anaranaESMAD, vondrona polisy misahana ny rotaka ao Colombia. Efa voampanga amin'ny famonoana olona sy ny herisetra ara-pananahana ry zareo.
“#ColombiaWithoutEsmad” Sary nopihana tao Popayán, Colombia, 6 May 2021. Saripika avy amin'i Fernanda Sánchez Jaramillo, nahazoana alalana.
Fandravahana iray hafa manoritsoritra ny herisetra tohanan'ny fanjakana, atsingerin'ny artista ny fanontaniana raha miasa ho an'ny olom-pirenena ny polisy.
“Izao no iarovanao ahy?” Sary nopihana tao Popayán, Colombia, 6 Mey 2021. Sary avy amin'i Fernanda Sánchez Jaramillo, nahazoana alalana.